Ihe ị ga-ahụ n'obodo Marseille n'otu ụbọchị | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Marseille n'otu ụbọchị
Susana Garcia | | Francia, General
Marseille bụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri mara mma emi odude ke edem usụk France. Obodo njem nleta nke bara nnukwu uru, ebe obu isi obodo mpaghara Provence-Alpes-Côte d’Azur na ngalaba Bouches-du-Rhône. Ọ bụghị n’efu ka ọ bụ obodo nke abụọ ndị mmadụ kacha biri na France niile mgbe Paris gasịrị, n’oge a ọ bụkwa ebe ọtụtụ ndị njem nleta chọrọ ịga.
En Marseille enwere otutu iji hụ ma anyị ga-anọ otu ụbọchị na ngwa ngwa, n'ihi ya, ị ga-adị njikere ileta isi ihe kachasị mkpa. N'otu ụbọchị, anyị ga-enwe ike ịhụ ma ọ dịkarịa ala akụkụ ya kachasị mma na ihe ncheta ndị pụtara ìhè.
1 Nnukwu Katidral Marseille
2 ochie Port
4 Basilica nke Notre Dame de la Garde
6 Abbey nke Saint Victor
8 Na-eje ije na Corniche
Nnukwu Katidral Marseille
Katidral Marseille abụghị katidral ahụ anyị na-atụ anya ịchọta na obodo ndị dị na Europe, ebe o nwere ihe pụrụ iche Zdị Byzantine Romanesque nke na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ọ dị n'agbata ọdụ ụgbọ mmiri ochie na nke ọhụrụ, na esplanade. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX n'oge nnukwu mmụba akụ na ụba. Katidral a na-adọrọ mmasị maka ihu ya nwere agba agba abụọ yana maka ọtụtụ nkọwa. N'ime anyị nwere ike ịhụ ọmarịcha marble bara ụba nke ga-eme ka anyị ju anyị anya, yabụ ọ bụ ihe kwesịrị. Enwere otutu mosaics nke Byzantine, anyi aghaghi ichefu mkpali ha, ya na otutu agba, ihe di egwu na Romanesque. Ọ bụ katidral nke anaghị ahapụ onye ọ bụla.
Nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mkpa n'obodo. Ọ bụ otu ọdụ ụgbọ mmiri kacha mkpa na Mediterenian kemgbe ọtụtụ narị afọ, nke ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ahụ gbapụrụ ugbu a. Taa ọ bụ marina ebe anyị nwere ike ịhụ Santa María Lighthouse, ụlọ nzukọ obodo ma ọ bụ Museo des Docks Romains nke na-agwa anyị gbasara ndụ ọdụ ụgbọ mmiri oge ochie nke mpaghara ebe kemgbe narị afọ BC. de C. N’ógbè a anyị nwekwara ike ịchọta mmanya ebe ị nwere ike ị haveụ ihe ọ yourụ yourụ mpaghara gị ma ọ bụ were ụgbọ oloko ndị njem ga-akpọrọ anyị na njem nke ebe kachasị adọrọ mmasị na obodo ahụ ma ọ bụ banye n'ụgbọ mmiri na-agafe ọdụ ụgbọ mmiri ochie site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ nke ọzọ.
Le Panier bụ akụkụ kasị ochie nke obodo ahụ na ógbè ebe bụbu nke ndị ọkụ azụ. N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta mpaghara nke ụfọdụ ụlọ yiri ka ọ dị njọ ma nwee ọpụrụiche pụrụ iche. Ochie ochie, obere ebe, ebe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị na obodo niile. Anyị ga-enwe ike ịhụ ebe dịka Ebe de Lenche, Vieille Charité ma ọ bụ Ebe des Moulins.
Basilica nke Notre Dame de la Garde
Religiouslọ okpukpe ndị mara mma ejedebeghị na Katidral Marseille, dị ka anyị kwesịkwara ịhụ Basilica a maara dị ka Ezi Nne. Na ụka nwere ọmarịcha ụdị neo-Byzantine na marble ọcha si Italytali na ọmarịcha ihe oyiyi nke Virgin. Ọ dị na ebe dị elu, yabụ na anyị enweghị ike ịga hụ basilica, kamakwa iji nwee ọmarịcha echiche obodo na Mediterranean.
Dị ka obodo ndị ọzọ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke a chọkwara nchebe, n'ihi ya anyị na-abanye n'ọnụ ụzọ Old Port na Fort Saint Jean. E wuru ya na narị afọ nke iri na asaa site na iwu nke Louis nke Iri na Anọ. Na mgbidi anyị nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ elu nwere akụkụ anọ na ụlọ elu okirikiri agbakwunyere mgbe e mesịrị iji nweta echiche ka mma banyere ụgbọ mmiri na-eru nso. Ugbo a nwere nzube iji chebe onwe ya mana kemgbe ọtụtụ narị afọ, ejiri ya dịka ụlọ mkpọrọ na ogige. O meriri nnukwu mbibi n'oge Agha IIwa nke Abụọ mana emesịrị weghachi ya. Taa ọ na - ejikọ ụzọ ụkwụ ọgbara ọhụụ na Museum nke European na Mediterranean, nke anyị nwekwara ike ịga leta ma ọ bụrụ na anyị nwere oge.
Abbey nke Saint Victor
Nke a abbey bụ otu n’ime ụlọ ndị kacha ochie na anyị nwere ike ịga na obodo ebe ọ bụ na ọ malitere na narị afọ nke XNUMX. N'èzí ọ dị ka ihe na-atọ ọchị ma ọ nwere ụlọ elu abụọ na-eme ka ọ dị ka ogige ma n'ime anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ crypts na-adọrọ mmasị na sarcophagi na veranda mara mma mara mma.
Boulevard Longchamp bụ ebe anyị nwere ike ịhụ mara ụlọ narị afọ nke XNUMX na-ejedebe na Obí Longchamp, nke mara mma nke ukwuu. Palacelọ a dị na ụlọ ya abụọ bụ Museum of Fine Arts na Museum nke Natural History, jikọtara ya na veranda semicircular n'ihu nke nwere isi iyi mmiri Baroque. Obi abụọ adịghị ya na ebe ọzọ anyị kwesịrị ịga leta ọbụlagodi na anyị enweghị oge iji banye na ebe ndebe ihe mgbe ochie.
Na-eje ije na Corniche
Ọ bụrụ na ị ka nwere oge n'obodo, ị nwere ike ịrara onwe gị nye na ịgagharị La Corniche, nke bụ mkpagharị n'etiti osimiri Catalanes na osimiri Parque du Prado. Na ije ị ga - ahụ ụfọdụ ihe na - atọ ụtọ dịka Bank of the Corniche or Villa Valmer of Renaissance style.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Ihe ị ga-ahụ na Marseille n'otu ụbọchị
Ihe ị ga-eme na Stockholm
Ihe ị ga-ahụ na Lima